Izinto ezimbi kunazo zonke kwiTable Periodic
Izinto ezimbi kunazo zonke ezaziwa ngabantu
Unokucinga ukuba izinto ezinokugqithisileyo zingakunikela ngolunye uhlobo lwesilumkiso, njengomsi okanye ukuvutha kwe-radioactive. Nope! Ininzi ayibonakaliyo okanye ingabonakali. I-WIN-Initiative, Getty Images
Kukho ezili- 118 izinto eziziwayo zamakhemikhali . Ezinye zazo ozidingayo ukuze uphile, ezinye ziyihlazo. Yintoni eyenza isakhi "esibi"? Kukho iintlobo ezintathu ezibanzi zokungalungi. Izinto ezinobungozi ezibonakalayo ziyingozi kakhulu. Ngelixa ii-radiosotopi zenziwa kwiphina into, unokwenza ngokucacileyo ukuhamba ngokucacileyo nayiphi na into evela kwi-atomic nombolo 84 (polonium) yonke indlela eya kwisiqendu 118 (into emitsha ukuba ibe negama okwamanje). Emva koko kukho izinto ezinobungozi ngenxa yobuthakathaka obunobungozi kunye nezo zibeka umngcipheko ngenxa yokuziphendulela okukhulu.
Ulungele ukuhlangabezana nezibi? Khangela ingqalelo eyona nto ibuhlungu kunabo bonke, indlela yokuqonda ezi zinto, kwaye kutheni ufuna ukuzama ukukhangela kwakho kunzima ukuza kucace.
I-Polonium Ngenye into ehle kakhulu
I-Polonium ayiyona into embi kakhulu kunanoma yiphina into eyenza i-radioactive, ide ifike ngaphakathi emzimbeni wakho! Steve Taylor / Getty Izithombe
I-Polonium ayinqabile, i- metalloid ene- radioactive eyenzeka ngokwemvelo. Kuzo zonke izicwangciso kwoluhlu, nguwe ongenakwenzeka ukuba udibane naye kumntu, ngaphandle kokuba usebenze kwisixhobo senyukliya okanye ujolise ukubulawa. Isalathiso sisetyenziswe njengomthombo wokushisa kwe-athomu, kwiibrashi ezichasene ne-static for film and industrial industries, kwaye njengobuthi obubi. Ukuba kwenzeka ukuba ubone i-polonium, unokwazi ukubona into ethi "ikhulile" malunga nayo kuba ikhuthaza ama-molecule emoyeni ukuvelisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Ii-particle ze-alpha ezikhutshwa yi-polonium-210 ayinayo amandla okwaneleyo ukungena kwesikhumba, kodwa isakhi siphumela ezininzi. 1 gram ye-polonium iphuma njengeenqwanqwa ezininzi ze-alpha njenge-5 kilogram ze-radium. Isalathisi ngamawaka angama-250 amawaka angaphezulu kune-cyanide. Ngoko, igramu enye yePo-210, ukuba ingenwe okanye ifakwe, ingabulala abantu abayizigidi ezili-10. Umntu owayengumhloli wee-Alexander Litvinenko wayetyhefu nge-polonium kwitheyi lakhe. Kuthatha iintsuku ezingama-23 ukuba afe. I-Polonium ayiyona into oyifunayo ukuyidlalisa.
Inoncili: Nangona abaninzi abantu bayazi ukuba uMarie noPerre Curie bafumene i-radium ungamangaliswa ukwazi ukuba okokuqala into ayifumene yi-polonium.
I-Mercury iyabulala kwaye i-Omnipresent
Isinyithi seMercury sinokungena ngaphakathi kwesikhumba, kodwa i-mercury ye-organic iyingozi kakhulu. CORDELIA MOLLOY, Getty Images
Kukho isizathu esihle sokuba awufumani i-mercury kwi-thermometers ezininzi. I-Mercury ihlala kufuphi negolide kwifestile yexesha , kodwa ngelixa udla kwaye unxibe enye, uya kulungele ukuphepha enye. Isinyithi esinetyhefu sininzi kakhulu kangangokuthi sinokungena emzimbeni wakho ngqo ngesikhumba sakho esingenakunyaka . Isalathisi se-liquide sinomfutho ophezulu womoya, ngoko ke nangona ungayichukumisi, uyayifumana ngokufuthwa. Umngcipheko wakho omkhulu kule ndawo ayiveli kwintsimbi ecocekileyo, ongayibona emehlweni, kodwa kwi-mercury ye-organic esebenza ngendlela yokuphakamisa ukutya. I-Seafood iyona mthombo owaziwa ngokugqithiseleyo we-mercury exposure, kodwa iphinda ikhululwe emoyeni evela kumashishini, afana neepilisi zamaphepha.
Kwenzeka ntoni xa udibana ne-mercury? Isalathisi sonakalisa iinkqubo ezininzi zomzimba, kodwa iimpembelelo zengqondo zibi kakhulu. Ichaphazela imemori, amandla omzimba kunye nokulungelelanisa. Naluphina ukutyhila kakhulu, kunye nomthamo omkhulu unokukubulala.
Ukuzonwabisa Okunandi: I- Mercury iyona nto yenziwe yinkampani yelitye elamanzi lokushisa.
I-Arsenic I-Poison Classic
I-Arsenic ingaba yinto eyaziwa kakhulu njengetyhefu. Buyenlarge, Getty Izithombe
Abantu baye batyhefu kunye nomnye nge-arsenic ukususela kwi-Middle Ages. Kwixesha lama-Victorian, kwakukhethwa ngokucacileyo kobutyhefu, kodwa abantu bazichazela ngokwabo kwiipende kunye nephepha lodonga. Kwiminyaka yanamhlanje, akunakuncedo lokubulala (ngaphandle kokuba ungacingi ukubanjwa) kuba kulula ukubona. Isalathisi sisasetyenziselwa ukugcinwa kwemithi kunye nezinye izilwanyana ezinobuncwane, kodwa ingozi enkulu ibangelwa kukungcoliswa kwamanzi angaphantsi komhlaba, ngokuqhelekileyo kubangelwa ukuba izitshizi zidibene kwiimithombo zamanzi ezine-arsenic. Kulinganiselwa ukuba izigidi ezingama-25 zaseMerika kunye nabaninzi abayizigidi ezili-500 emhlabeni jikelele basebenzisa amanzi anesiphelo se-arsenic. I-arsenic ingaba yinto ebaluleke kakhulu, ngokubhekiselele kwingozi yomphakathi.
I-Arsenic iphazamisa ukuveliswa kwe-ATP (loo molekyuli iiseli zakho zidinga amandla) kwaye ibangela umdlavuza. Amanani amancinci, anokuthi abe nempembelelo yokunyusa, kubangele i-nausea, ukuphuma kwamanzi, ukuhlanza, kunye nesifo sohudo. Umthamo omkhulu udala ukufa, kodwa ukuphelelwa kancinci nokubuhlungu okuqhelekileyo kuthatha iiyure.
Ukuzonwabisa Okuncokolayo: Nangona ifile, i-arsenic yayisetyenziselwa ukuphatha i-syphilis kuba yayingaphezulu kunonyango lwangaphambili, olubandakanya i-mercury. Kwixesha langoku, i-arsenic compounds ibonisa isithembiso ekuphatheni i-leukemia.
I-Francium iyingozi kakhulu
I-Francium kunye nezinye izinyithi ze-alkali zenza ngamandla ngamandla ngamanzi. Into ecocekileyo ingathanda ukuqha ga mshelana nolusu. I-Science Picture Co, i-Getty Images
Zonke izakhi kwiqela lezinyithi ze-alkali zisebenza ngokugqithiseleyo. Uza kufumana umlilo xa ubeka insimbi ecocekileyo ye-sodium okanye ye-potassium emanzini. I-reactivity iyanda njengoko uhamba phantsi kwetafile, ukuze i-cesium iphendule ngokukhawuleza. Akukona i- francium eninzi ekhutshwe, kodwa ukuba unelungelo lokubamba iqela entendeni yesandla sakho, ufuna ukugqoka iiglavu. Ukuphendula phakathi kwesinyithi kunye namanzi kwesikhumba sakho kunokukwenza ube ngumlando kwindlu yexakeka. O, kwaye ngendlela, i-radioactive.
Ukunyaniseka: I-ounce enye kuphela (20-30 gram) ye-francium inokufumaneka kwihlabathi lonke. Isixa sento esenziwe yintlalo ayinelanga ngokwaneleyo.
Inkokeli Ngaba Ubuthi Ohlala Nawo
Inkokheli isetyenziswe okanye ihlambela iimveliso ezininzi, akunakwenzeka ukuphepha ngokupheleleyo. I-Alchemist-hp
Inkokheli yintsimbi ekhethwa ngokukhethekileyo enye indawo yezinyithi emzimbeni wakho, njengensimbi, i-calcium kunye ne-zinc kufuneka usebenze. Kwizinga eliphezulu, ukutyhila kunokukubulala, kodwa ukuba uphila kwaye ukhaba, uhlala kunye nenye emzimbeni wakho. Akukho nqobo "ekhuselekileyo" yokukhutshwa kwento, efumaneka kwiisisindo, i-solder, iigrafu, i-plumbing, ipeyinti, kwaye ingcolileyo kwezinye iimveliso ezininzi. Into ebangela umonakalo wesistim kwinkqubo kubantwana kunye nabantwana, okubangele ukulibaziseka kokuphuhliswa, umonakalo womzimba kunye nokunciphisa ingqondo. Inkokeli ayenzi abantu abadala nokuba yiyiphi inzuzo, nokuba ithintela uxinzelelo lwegazi, ikhono lokuqonda, kunye nokuzala.
Inyaniso Yolonwabo: Enyanisweni, le nyaniso ayinandi. Inkokheli enye yeekhemikhali ezimbalwa ezaziwa ngaphandle kwendawo ekhuselekileyo yokukhutshwa. Nokuba ubuncinane beminithi bangela ingozi. Akukho nxaxheba eyaziwayo yendima edlalwa yile nto. Enye into enomdla kukuba i-element is toxic kwizityalo, kungekhona nje izilwanyana.
I-Plutonium I-Metalactive Enamandla
I-Plutonium inokubonakala ngathi yinyithi enesiliva, kodwa inokukhupha emoyeni (utshise ngokwenene) ukwenzela ukuba ibonakale njenge-ember ebomvu. ILebhu yeSizwe yaseLos Alamos
Inkokeli kunye ne-mercury zizinto ezimbini ezinobunzima obuyingozi, kodwa abayi kukubulala ukusuka kwigumbi (ngokufanelekileyo, ndixoke ... i-mercury yinto enokutshatyalaliswa ngokwenene). I-Plutonium injengomnye umzalwana onomsakazo kwenye insimbi enzima. Yinobuthe ngokwalo, kunye nokukhukhula kwayo ejikeleze i-alpha, i-beta kunye ne-gamma radiation. Kuqikelelwa ukuba ama-gramu ama-500 e-plutonium, xa athembise okanye atywala, angawabulala abantu abayizigidi ezi-2. Akulona nje inetyhefu njengepolonium, kodwa iputonium ininzi kakhulu, ngenxa yokusetyenziswa kwayo kwizixhobo zenyukliya kunye nezixhobo. Njengabo bonke abamelwane bawo kwitheyibhile lexesha, ukuba akunakukubulala ngokuthe ngqo, unokufumana ukugula kwesifo okanye umhlaza.
Ukunyaniseka: Njengamanzi, i-plutonium yenye yezinto ezimbalwa ezandisa ukwanda kwamanzi xa zitshatyathwa kwiqinileyo zibe zixhobo.
Icebiso elicebisayo: Musa ukuchukumisa izitye ezikhanyayo ezibomvu. Umbala usenokuthi batshisa ngokwaneleyo ukuba babe yi-incandescent (okanye u-ouch) okanye nokuba ngumqondiso ojongene ne-plutonium (i-ouch kunye ne-radiation). I-Plutonium i-pyrophoric, eyona nto ithetha ukuba inomdla wokungcola emoyeni.
Itheyibhile Yesiqhelo Esiqhelekileyo
Ixesha lokuSetyenziswa kokuThola
Iikhowudi ze-HTML - Iincwadi zeGrike
10 I-Silicon Facts (Inombolo yeNombolo 14 okanye i-Si)
Inkcazo kunye neZakhiwo zeNotmetals
Ukuqonda i-Dimorphism yesondo
I-Stick neLeaf Insects, Myalelo wePhasmida
Ukuqonda Ukusebenza kweeTire eziTyebileyo
Isikhokelo sokuqala kuMbuso we-Aztec waseMexico eMbindi
Iifayile zeeHholide kunye neMisebenzi YemiSebenzi
Amanqaku okuQhathaniswa kweeMviwo zeeKholeji zaseNew York zaseNew York neeYunivesithi
Yayiyiphi Iyokuqala Yokudlala kaShakespeare?
Ubume bemiSebenzi yoBume
Ukunceda abafundi abaneDyslexia kunye neDysgraphia Ukuphuculwa kweZakhono zoBhala
Iprogressivism ichazwe: Iinjongo kunye neenjongo
Ngaba ngabafazi beeHindu, iintombi zinelilungelo leeMpahla?
Umlinganiselo weeNkcazo zeNtsholongwane ukusuka kwi-Age Middles
I-9 ye-Psychedelic Furs Iingoma ze-80s
Inkcazo yeNombolo Inkcazo
I-Matrix neNqulo: Ngaba Ifilimu YamaKristu?
Ulwimi lwesiFrentshi: Iimpawu kunye namanani
Indlela Yokulungelelanisa Ibhasikidi Yakho kunye Neziphi Iimpawu Ezizifunayo
Kutheni ungafaneleki ukunika izilwanyana ngaphandle kwekhaya elilungileyo
IiDonphins zilala njani?